Nin dacweynaya Madonna, kuna dhawaaqaya 10h30 riwaayadaha ayaa bilaabanaya xilli dambe - dadku - WAA LA DILAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Ninku wuu dacweeyey Madonna maxkamadda, isagoo ku dhawaaqaya 10h30 riwaayaddu waxay bilaabmaysaa xilli dambe - dadku
Nin ayaa dacweeynaya Madonna maxkamadda, isaga oo ku dhawaaqaya 10h30 riwaayadu waxay bilaabmaysaa xilli dambe - dadku
Waxaa qoray Leah Asmelash | CNN
"Waa inaad wax fahanto," Madonna waxay tiri intii ay ku guda jirtay riwaayadeedii Las Vegas, iyadoo sida loo haystay sineer ah, lugaha ay ka socdaan. "Waana boqoraddu waligeed ma soo daaho."
Xiddiga mega hadlay ereyadan taageerayaasha ah intii lagu jiray bandhiga toddobaadkan, iyagoo daabacay fiidiyowga on Twitter Sabtida .
F. ACTS. .................. .. #madamextheatre #thecolosseum pic.twitter.com/QBV99f1Y3I
- Madonna (@Madonna) 9 November 2019  Iyo in kasta oo ay ku faraxsan yihiin dadka badan, qof walbana ma raacsana. Taageere Florida waa khiyaanay in sharcigu uusan aqbalin sidoo kale.
Nate Hollander waxay ku dacwaynaysaa heesta maxkamada horteeda bilowgeedii ugu dambeeyay.
Hollander ayaa dacwad ka gudbisay maxkamadda Miami-Dade County Isniintii iyagoo ka dhan ah Live Nation iyo Madonna. . Wuxuu ku andacooday in beddelaadda waqtiga bixitaanka ee Ms. X Tour ay xadgudub ku tahay heshiiska u dhexeeya heesta iyo iibsadaha tigidhada.
Bishii Agoosto, markii Hollander iibsaday tikidhada bandhigga Madonna, oo lagu qaban doono Diseembar 17 ee Fillmore Miami Beach, riwaayadda waxaa loo qorsheeyay inay ka bilaabato 20h30, sida ku xusan dacwadda. Laakiin Oktoobar 23, Madonna iyo Live Nation ayaa isbedelay waqtiga bilowga ah ee showga iyo dhowr kale oo 22 h 30 ah, sida eedayntu sheeganayso.
Kuwaas oo kale sida Hollander, oo iibsaday tikidhada oo aan mar dambe xidhnayn.
Iyo isku dayga dib-u-gurashada kamaadhna doono lacag lumay maaddaama qoraalladu "la soo deristay dhibaato aad u daran" sababta oo ah isbeddelka waqtiga, ayuu yidhi. Tani waxay ka dhigeysaa resale "wax aan macquul aheyn," ayuu yidhi.
Hollander asal ahaan wuxuu iibsaday seddex tigidh oo loogu talagalay bandhigga Madonna ee Miami Beach, isagoo ku qarash gareeyay $ 1 024,95, ayuu yidhi. Laakiin maadaama bandhiga uu hadda bilaabmayo xilli dambe oo loo qorsheeyay, wuxuu sheeganayaa in isaga iyo dadka kale ee tikidhada haysta "ay soo gaareen waxyeelooyin dhab ah iyo mid aan toos ahayn, oo ay ku jiraan luminta tixgelinta mushaharka iyo qiimeynta tikidhada".
CNN waxay la xiriirtay Madonna iyo Live Nation khadka taleefanka e-maylka iyo codka, laakiin codsiyada hadalada dib looma soo celin.
& 2019, Shabakada Cable News Network, Inc., oo ah shirkad la yiraahdo WarnerMedia. Dhamaan xuquuqaha ayaa ilaaliya